Ekpere nye Lazarọs dị ebube. ? Ndị Ọrịa, Nkịta na Ahụike
Ekpere Saint Lasaro Amara kemgbe oge ochie dịka onye enyemaka dị ukwuu nke ndị ogbenye, ndị ọrịa na anụmanụ. Na kpegara Saint Lazarọs ekpere Ọ bụ ngwa agha dị ike nke enyere anyị, nke esitekwara n'okwukwe rụọ ọrụ nye anyị ọrụ ebube dị ike dịka ihe anyị chọrọ.
Mgbe oge na-aga ọ bụrụla onye nkwado na onye enyemaka ya na obodo ndị idina ụdị onwe ha na ndị Cuba ndị na-eme kwa afọ, na Disemba 17, na-eme na El Rincón iji mee ọ theụ nke ọmụmụ nke onye nsọ dị ebube.
1 EKPERE LARA SATARA onye bu Saint Lazarọs?
1.1 Ekpere nye Saint Lazarọs ọrụ ebube
1.2 Ekpere nke Saint Lazarọs maka ndị ọrịa
1.3 Maka nkita
1.4 Maka ahụike
2 Nke a dị nsọ?
EKPERE LARA SATARA onye bu Saint Lazarọs?
N’okwu Chukwu anyị na-ahụ ndị Lasaị abụọ; onye akpọrọ n’ilu ​​nke ọgaranya na ala larịị ebe Jizọs kọwara igwe na ala mmụọ.
Lazarọs nke abụọ bụ nwanne Marta na María na onye ọ bụla protagonist nke otu ọrụ ebube kacha nke Jizọs N’elu uwa, nbilite n’onwu.
Na okwukwe Katọlik, ihe odide abụọ a dị n’otu n’ihi na o siri ike ikewapụ ha ebe ọ bụ na nke ọ bụla nwere myirịta dị mkpa na nke ọzọ.
A maara ya nke ọma dị ka onye na-enyere ụmụ anụmanụ aka nke ukwuu, nke bụ eziokwu na ọ bụ onye nkịta na - echekwa nkịta, mana nke a bụ ihe sitere na okwukwe mmadụ ebe ọ bụ na onye senti na - enyere onye ọ bụla chọrọ ya aka.
Ọ na-agwa akụkọ na ọ dịrị ndụ ruo mgbe ọ gbara afọ 60 na liekwa ozu ya na a sarcophagus nke emere na mabdi na 1972 ka ahuru ya ka dikwa n’ile ya anya.
Ekpere nye Saint Lazarọs ọrụ ebube
Saint Lazarus, enyi nke Jisos Kraist na nwanne na onye n’echebe ndi ahuhu!
Gị onye maara ihe mgbu nke ọrịa na ọbịbịa nke Jizọs Kraịst weghachiri ndụ gị na Betani, jiri nwayọ nabata arịrịọ anyị, mgbe anyị na-arịọ enyemaka gị n'oge awa nke ahụhụ.
Kpee ekpere nye Nna mgbe Ebighi-ebi ka anyị nwee ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na ike nke Jizọs.
Saint Lazarọs rụrụ ọrụ ebube, onye sitere n'ike nke Jizọs Kraịst kpọlitere, anyị na-arịọ gị maka oge nhụjuanya gị na maka ọ joyụ na-enweghị njedebe nke ị nwetara mgbe Jizọs jiri okwu ọma ndị ahụ zipụ gị n'ili, ịrịọ Nna gị ukwu Chineke arịrịọ ka ọ bụrụ site na gị Ogbenye anyị nye anyị ihe anyị tụkwasịrị obi.
Chọọchị Katọlik amatala n'ihu ọha ike nke Saint Lazarọs ma o nwere ya dịka otu n’ime ndị nsọ a na-enye nsọpụrụ na okwukwe, yabụ were ekpere ya.
N'ụzọ a, anyị nwere ike ịchọpụta nke a ekpere na ebili n’ihu ocheeze ya abụghị ekpere na -adaghị ma ọ bụ ịrịọ arịrịọ n'efu, kama nke ahụ, bụrụ isi na-esi ísì ụtọ n'ihu ọnụnọ ya, azịza ya abịakwute anyị.
Iji kpee ekpere n’ezie adighi emebe ya, n’agbanyeghi na odi nkpa imesi ike na ihe ebube n’ezie bu ime ka ekpere si n’obi ya puta ma doo anyi anya.
Ọ bụrụ na emeghị ya n'ụzọ dị otu a, ikwughachi ihe efu na enweghị isi.
Ekpere nke Saint Lazarọs maka ndị ọrịa
Gọziri agọzi Saint Lazarọs, onye ọkịkpe m, onye nchebe m dị nsọ, etinye m ntụkwasị obi na gị, etinye m mkpa m, nchegbu m na nchekasị m, nrọ m na agụụ m, na ebe m maara ọtụtụ ọrụ ebube a rụworo ọrụ site na gị, ịmara ịdị mma nke na-esite n’aka gị mgbe ejiri obi umeala na okwukwe rịọ gị, taa a na m abiakwute gị, na-arịọ maka enyemaka na ebere gị dị ike.
Saint gozie Saint Lazarọs a gọziri agọzi, maka olile anya dị ebube nke jisiri obi gị ike iru okpueze nke nwụrụ n'ihi okwukwe gị iji nyefee ndụ gị maka Onye nyere gị ọzọ mgbe ọ nwụsịrị, nye m Saint Lazarọs dị ebube ihe bara uru gị. Ogbaghara m, kpee ekpere maka ochicho obi m tupu ezi Jizọs, enyi gị, nwanne gị na onye nyere gị aka, ma rịọ ya ka m jiri obi ebere ya na - enweghị atụ mee ka m jiri obi m niile rịọ ya wee nwee ike nwee ahụ iru ala.
(kwuo ma obu ihe ichoro imezu)
ma ọ bụrụ n’uche na odighi ekwenye, nye m udo na obi iru-ala nke na enwerem olile anya na mmezu nke Chukwu ga-agba arụkwaghịm.
Saint Lazarọs, nna dị ebube nke ndị ogbenye, a na m arịọ gị ka ị kwụsị inyere m aka, gosipụta onwe gị na-efe ofufe ka ị na-eme mgbe niile ma na-ewere arịrịọ m n’iru Onye-nwe ozugbo enwere ike, nye m ngọzi na nchedo gị, bepụ iru uju m na nsogbu m wee wepụ ajọ m na onye iro m niile. .
Site na Jisos Kraist, nwanne anyi nwoke na Onye nwe anyi.
Ekpere ha na-ekpe Okwu banyere ahụike bụ ihe kachasị mkpa mgbe niile na nke a bụ isiokwu nke ọtụtụ oge naanị ọrụ ebube nke Chineke nwere ike inyere anyị aka.
Saint Lazarọs, onye maara ihe ọ bụ ịrịa oria ọnwụ na ọ nwụrụ ma biri n’anụ ahụ ya bụ mbilite n’ọnwụ, bụ ihe dị nsọ gosiri iji nyere anyị aka n’ọnọdụ a.
Ọ maara ihe nwere ike ịta ahụhụ site n’ịta ahụhụ anụ arụ nke nwere ike ịkwụsị ndụ anyị, ọ bụ ya mere ọ jiri bụrụ onye ọka iwu zuru oke n’ihu ocheeze eluigwe ebe ọ matara na ọrụ ebube nke mbilite n’ọnwụ ga-ekwe omume.
Anyị ga-agarịrị n’akụkụ maka ekpere nke Lazarọs maka nkịta na anụmanụ.
Ezigbo Saint Lazarọs;
Ndụ gị nyefee ọrụ nke Onye-nwe wee were gị
Inwe ekele maka obere ihe na ndụ; Omume dị nsọ nke Chineke na mkpakọrịta nke ụmụ anụmanụ kwesịrị ntụkwasị obi.
More maara karịa anụ ụlọ ọ bụla ọzọ
Maka obi uto ndi mmadu.
Ndị a na-eso anyị mgbe naanị anyị nọ, ọ bụghịkwa n'ime obi ya, anyị nwere ike ịchọta ịhụnanya na mmetụta na-ekpo ọkụ.
Anụmanụ merụrụ m ahụ nke ọma
Ma adighi ike, ya mere ejiri m okwukwe m were ajuju m
Were ike gị n’ụzọ ọrụ ebube gwọọ ya.
Gee nti ihe a, a na m ario gi ma arapukpo m tupu ariri a.
Kpee ekpere nkịta dị nsọ maka nkịta na nnukwu okwukwe.
A na-enyocha ikpe ndị siri ike, ogbenye y gbahapụrụ nke nwekwara anụmanụ, ọkachasị nkịta. Nke a bụ ekpere nke mmadụ ole na ole na-akwụsị ikwu na nke ahụ dịkwa mkpa n'ihi na nkịta bụ ihe dị ndụ nke chọkwara enyemaka anyị na ekpere anyị.
Ha na-arịa oria, agbahapụ, agụụ, mwute na ihe mgbu. Ha bụ ndi dị ndụ nwere mkpa nke mmụọ na anụ ahụ nke ọtụtụ oge na-enweghị onye ọ bụla n’enweta inye nke na-eme ka ha taa ahụhụ.
Ezigbo Saint Lazarus;
Onye kwesiri ntukwasi obi nke Kraist na onye akaebe n’anu
Nke ọrụ ebube nke Mesaịa.
Gị, ụbọchị a, eji m obi ebere na-akpọrọ gị arịrịọ maka okwukwe m niile
I nye m ike, na onyinye onyinye
Nke mere na m weghachite steeti m nweburu ụtọ na ya.
Knowmara ihe mgbu, ọrịa, nhụjuanya na nhụjuanya bụ.
Know ma ihe ọ ga-ebu bute ọrịa
Chọpụta mgbidi na ihu maka enyemaka.
Ekwu m, onye mm hụrụ n'anya, m weliri elu-igwe
N'ịchọ ebere, enyemaka na ọ joyụ.
Were ha n'uwe-gi ma mee m ihe kwesiri ka m juo.
San masịrị ekpere San Lazaro maka ahụ ike?
Ahụike na-ewere ọtụtụ akụkụ na ndụ ndị dị ndụ, sitere na anụ ahụ ruo mkpa ime mmụọ na ha niile dịkwa mkpa.
Ọ bụ ya mere ekpere a wee bụrụ nke kacha mkpa.
Ọ na-atụ aro ịme ya kwa ụbọchị yana ọ bụ na ezinụlọ ya mere ọ ka mma ebe ọ bụ na mgbakwunye na ịbụ ọrụ ime mmụọ na-ewusi ntọala ezinụlọ ike, ọ na-enyere anyị aka inwe mmetụta nke ịbụ ndị na-eche nche n'oge njem ụbọchị kwa ụbọchị San Lázaro, nchebara ihe isi ike ndị a niile, na-arịọchitere ha arịrịọ ka Ha nwere ike nweta udo ma zuo ike n’oge ihe isi ike na ọnwụnwa.
Nke a dị nsọ?
Azịza ya bụ ee, ihe nzuzo bụ okwukwe nke ekuliri ekpere n’elu ebe ịchụàjà gị.
Ihe niile anyị gwara nna kwenye, anyị ga-anata, nke a bụ nkwa anyị na-enweta na Akwụkwọ Nsọ na nke a mere n'ezie mgbe anyị kwenyere na ọ bụ.
Nke a mere na ekpere bu oru nke okwukwe doro anya ma ghara inwe omume.
Ekpere e ji okwukwe kpee nwere ike ime ihe niile, ọbụlagodi ọrịa ndị kachasị njọ nke nwere ike ịdị.
Were ike nke ekpere nke Lazarọs.